Sida loo rakibo macOS Mojave "aan la taageerin" Mac | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo rakibo macOS Mojave Mac "aan la taageerin"
Waxaa jira wado lagu rakibo macOS Mojave kombiyuutaradaas oo Apple aysan si rasmi ah u cusbooneysiin maantana waa si sax ah waxa aan arki doonno. Xaaladdan oo kale, waxa ugu muhiimsani waa in la caddeeyo inay tahay geedi socod xoogaa adag oo ma noqon doono mid fudud sida haddii Apple lafteeda loo oggolaaday rakibidda Macs-yada aan la taageerin.
Waxa ugu fiican ayaa ah in horumariyaha uu abuuray aalad u gaar ah oo noo oggolaaneysa inaan sameyno rakibo dhib yar, laakiin xitaa iyada oo leh Maaha hawl fudud oo waxay u baahan tahay tallaabooyinkaaga. Qalab lagu cusbooneysiiyo balastarrada loo yaqaan 'Patch Updater' ayaa sidoo kale lagu daray, wax lagu qaddariyo kiisaskaas.
Fiidiyowgaan ee 1 waxaan ku arki karnaa howsha qaab fudud muddo ka yar nus saac. Ku rakibida macOS Mojave taxane ah shuruudaha ayaa lagama maarmaan u ah inaan ka tagno fiidiyowga oo si cad u ah balastarka ay abuurtay dosdude1 si loogu rakibo waxay u baahan tahay rakibaye 16GB USB ah. Waxaan waxan oo dhan ka heli doonnaa sharraxaadda fiidiyowga waxaan sidoo kale uga tagnay hoosta fiidiyowga.
Mac Pro, iMac, ama MacBook Pro 2008 wixii ka dambeeyay
MacBook Air ama MacBook Unibody aluminium dabayaaqadii-2008 ama ka dib
White Mac Mini ama MacBook horaantii 2009 wixii ka dambeeyay
Xserve laga bilaabo horaantii 2008 ama ka dib
Liiska Mac in AAN la jaan qaadi karin xitaa nidaamkan rakibaadda Waxay yihiin:
Sida loo cusbooneysiiyo macOS Mojave
Mac Pro, iMac, MacBook Pro iyo Mac Mini 2006-2007
Kaliya 7,1 iMac2007 waa la taageeray haddii CPU-ga loo casriyeeyay Core 2 Duo ku saleysan Penryn, sida T9300
MacBook4,1 -MacBook Air laga bilaabo 2008 (MacBookAir1,1)
Waxa ugu muhiimsani waa inaad haysato aaladda Qalabka loo yaqaan 'Patcher Tool' oo laga helay buugga tilmaamaha iyo muuqaalka muuqaalka ah. Haddii ay dhacdo inaad u baahato macluumaad dheeri ah ama aad hayso tallaabooyinka aad gacanta ku hayso waxaad arki kartaa websaydhka horumariyaha ee aad ka heli doontid faahfaahiyay dhammaan buuggan rakibidda. Hadda waxaad haysataa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u aragto Mac-gaaga oo uusan taageerin macOS Mojave adiguna waxaad mas'uul ka noqon doontaa go'aaminta haddii ay mudan tahay in la sameeyo rakibintan iyo in kale.
Waxa aan ka nidhaahno ku saabsan hawshan rakibidda macOS Mojave waa taas tan looguma talagalin dhammaan dadka isticmaala mac Maaddaama ay tahay geedi socod rakibo oo aan fududeyn sidoo kale waxaa laga yaabaa inaysan si fiican uga shaqeynaynin Mac-keena sababo la xiriira is-waafajinta shaxanka, waxay noqon kartaa inay jiraan cilado la xiriira xiriirka WiFi, Bluetooth-ka, cillad-darrooyinka la mid ah. Tani waa wax ay soosaaraha iyo abuuraha casharka ka digayaan, markaa ma aha wax ay tahay inuu dib noogu soo noqdo haddii macOS Mojave cilladdu dhacdo.
Dhanka kale, kuma talinayo in lagu rakibo qalabka lagama maarmaanka u ah isticmaalka maalinlaha ah, shaqada ama wixii la mid ah ee aan soo sheegnay. Marka ugu horreyntii waxaad dhahdaa marka lagu daro inay yihiin waxoogaa dhib badan oo ka badan sidii caadiga ahayd, wax kasta oo laga yaabo inaysan si dhammaystiran ugu shaqeynin Mac-geenna iyada oo aan la taageerin macOS Mojave. Waa mas'uuliyadda mid kasta inuu fuliyo rakibidda iyo in kale iyo kooxda Soy de Mac mas'uul kama aha wixii dhibaato ah ee ka dhalan kara rakibidda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo rakibo macOS Mojave Mac "aan la taageerin"
Marka hore waad ku mahadsantihiin kaalintiina.
Waxaan raacayaa talaabooyinka waxaan ku rakibey Mojave on my iMac 12,2 iyo habka u shaqeeyey, laakiin ka dib markii keddibna shaashadda muujinaysaa dhammaan midabada la beddelay.
Waxaan qiyaasayaa inay jiraan xoogaa iswafaqsanaanta shaxanka kombiyuutarka.
Xal ma ka fikiri kartaa?
Waad ku mahadsantahay horay.
Jawaab Josep Pérez
Su’aashu ma mudan tahay? oo waxqabad badan lumiyo? Sababtoo ah marka la cusbooneysiinayo, marka lagu daro inaad nooga digto inay dhici karto oo ay qasab tahay in laga bilaabo meel hoose, ma jiro wax hadal ah oo ku saabsan waxqabadka
Waxaan ku rakibay Imac laga soo bilaabo bartamihii 2010 midabadiina waa la beddelay oo sawirada ayaa xun. Dhaqaaqa daaqadaha ayaa xiraya.
Salaan Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa. Midabada waa la beddelay casaankiina waa la waayey. Xal kasta?
Aniga isla dhibaatadii ayaan ku jiraa, wax xal ah ma heshay?
Waan ku biirayaa, isla waxbaa igu dhaca aniga iyo kuwa kale oo midabbo leh
Ku jawaab pikuko
Waxaan ku rakibay dabayaaqadii 2009 MacBook Unibody oo si fiican ayuu u shaqeeyaa. Waxaan sidoo kale ku rakibay 2010 MacBook Air, oo isna si fiican ayuu u shaqeeyaa. Miyaad dhajisey xulashooyinka uu dejiyey soosaaraha balastarka nooc walba dhamaadka rakibaadda?
Haa, way shaqeysaa, sifiican uma shaqeyneyso, waxay kuxirantahay isticmaalka aad siiso, wax walba wey kuu shaqeyn doonaan adiga iyo haddii kale. Aad ayey u gaabisaa, sidoo kale maalintii ugu horreysay ee nidaamku burburay. Sidoo kale ma shaqeynayo isbarbar yaac, ama kumbuyuutar sanduuq ah, illaa uu daaqado XP yahay mooyee. Waxay ahayd inaan ku laabto OS X El Capitan wax walbana way fiicnaayeen mar labaad, si kastaba ha noqotee mahadsanid, waa inaad isku daydaa. MacBook Pro 17 ″ 5,2 Mid 2009. SSD 8GB oo RAM ah inta ugu badan ee ay qalabeyn karto. Ka fikir kahor intaadan rakibin. salaan
MacBook Pro 13 »dabayaaqadii 2011,
Sawirada: Intel HD Graphics 3000 512 MB,
16gb wan iyo sd.
Lagu rakibay dhibaato la'aan laakiin waxa isticmaaleyaasha kale yiraahdeen, balastarka shaashadda xitaa ma aanan dareemin. Laakiin haddii kombuyuutarka kumbuyuutarka, sanduuqa kumbuyuutarka iyo barnaamijyada kale ee horumarinta ama naqshadeynta ay aad uga gaabiyaan, xitaa kuuma sheegi doono
Runtii waan jeclahay mawduuca mugdiga ah ee ay ku soo bandhigeen Mojave, laakiin, aniga iguma mudna aniga inaan maalin kasta ka shaqeeyo mac-ku, si aad u liidata ayaa loo hagaajiyaa, laptop-kayga.
Ku biirinta weyn ee soosaaraha balastarka +1!
Ku rakib Mojave barnaamijka 'Macbook pro 2011', moodeelka 8.2. iyada oo aan lahayn dhibaatooyin waaweyn. Waxaan raacay nidaamka soo-saarka balastarka. Si kastaba ha noqotee, kuwa go'aansada inay sameeyaan, ka dib rakibidda mojave, ma bilaabi doono, waa inay ka soo baxaan USB-ga rakibida oo ay ku ordaan balastarka, waa dhamaadka daaqad ka furaysa qaybta bidix ee hoose. Halkaas ayey ka raadsadaan moodeelkaaga Mac oo ay ku dabaqaan balastarka u dhigma. Xaqiiqdii, marka laga hadlayo qaabkeyga, sawirada loo yaqaan 'radeon graphics' kuma shaqeynayaan dardargelinta. Waxaan isku dayay inaan rakibo nooca ugu dambeeya ee pro 10.4.5 waxayna sheegaysaa in garaafku uusan taageersaneyn. Si kastaba ha noqotee, ka dib casharro kale oo uu soo saaray isla horumariyuhu, waxaan ku curyaamiyey sawirada 'radeon iyo' voila sawirada isku dhafan ee ah intel hd 3000, Final cut pro, kii ugu dambeeyay, oo si fiican u shaqeeya. Laakiin haa, markaad curyaamineyso jaantuska loo qoondeeyay, xakamaynta dhalaalka ma shaqeynayo ama ma hakinayo marka la xiro daboolka. Mid kale. Gunaanad ahaan, wax waliba way shaqeeyaan marka laga reebo wixii aan soo sheegay, wali waad ka tagi kartaa adigoon curyaamin garaafka, laakiin barnaamijyada sida goynta kama dambaysta ah ee u baahan dardargelinta ma shaqeyn doonaan. Qaar kale waxay jecel yihiin macquul macquul x inay si fiican u shaqeeyaan wax qabadkuna aad u fiican yahay, toban jeer ka roon yahay riyada qaaliga ah ee 'High sierra' oo aan waligeed si dhexdhexaad ah ugu shaqeyn kumbuyuutarkayga.
Jawaab Rubén Reyes
MacBook Pro bartamihii 2009
Waxay u socotaa si aad u wanaagsan. Dhibaatooyinka midabka shaashadda waxaa lagu xalliyaa iyadoo laga saarayo ikhtiyaarka hufnaanta xulashooyinka shaashadda marin u helka.
Waxa kaliya ee aan shaqeyneynin waa kamaradda iSight ee ku qoran sida loo la'yahay.
Waxqabadka waa mid aad u siman, laga yaabee sababtoo ah sawirada qaabkani waa nVidia oo maahan ATI. Qaybaha intiisa kale way fiican yihiin.
Jawaab José Carlos
Carlos, tallo kasta oo aad na siiso cashar ku saabsan sida loo sameeyo? Ma heli karo sawirada ugu dambeeya. Sawiradu way soconayaan laakiin kama arki karo sawirka barnaamij kasta oo tafatir ah.
Jawaab Alejandro ,.
Sideed u soo degsatay feylka rakibidda? AppStore-ka wuxuu ii sheegayaa inaan la taageerin oo aan ii oggoleyn inaan soo dejiyo.
Waayahay Waxaan kaliya arkay in lagula soo bixi karo patcher
Waxaan hayaa macbook pro 2011, 13 ″ inji horraantii 2011
Xusuusta: 8GB 1333 mH3 DDR3
Sawirada: intel HD sawirada 3000 512 MB
Waxaan rabay inaan ogaado hadii aad ka badali karto maverick una guurto mojave? Haddayse awoodo, sidee loo samayn lahaa markii la heli waayo inay ka soo degsato App Store ???
Ka jawaab ECM
Haye, ugu badnaan ee aad ku rakibi karto kombiyuutarkaas sida ku cad Apple waa:
macOS Sare Sierra 10.13.6 (17G65)
Marka la raaco casharka maqaalka, ma garanayo haddii aad Mojave uga gudbi karto kooxdaas, in kasta oo ay tahay inaad u gudubto
Jawaab Jordi Giménez
Waxay u shaqeysay aniga sifiican! On a Macbook hawada bartamihii 2011 Core i5 iyo 2G oo ka yimid Ram.
Sharootada la dabaqay ayaa shaqeysa wax walbana waa hagaagsan yihiin, xitaa way ka fiican yihiin dusha sare
Sideen u soo dejisan karaa nuqul Mojave ah?
Hadaad raacdo casharka dosdude1.com, ma waayi doontid. Waxaad sidoo kale ka bixi kartaa Mojave halkaas.
Waxaan ku isticmaalayaa 2009 MacBook Pro (16 Gb RAM iyo SDD) runtuna waxay tahay inaysan jirin dhibaatooyin waaweyn. Waa inaan idhaahdaa ma isticmaalo Office ama Photoshop ama wax la mid ah. Aaladda otomaatiga ah ee yar ee aan u baahanahay, waxaan ku haystaa barnaamijyada Google daruuraha, wixii aan haray
Si kastaba ha noqotee waxaan qabaa su'aal ah in aan weydiiyo: marar badan ayuu igu celceliyaa in ay tahay in aan u beddelo Big Sur, oo aanan rabin in aan sameeyo, ugu yaraan weli ma ahan. Anigana waxaan qabaa shaki weyn oo ah inay bilaaban karto. Laakiin aniga oo aan aqbalin cusbooneysiintan, ma ii oggolaaneyso inaan soo dejiyo inta ka hartay casriyaynta aniga xiisaha ii leh (balastarrada amniga ee Mojave, Cusbooneysiinta Daabacayaasha, iwm ...). Soo jeedin kasta?
tvOS 12.0.1 hadda waa loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha
Riwaayadda cajiibka ah ee Alto ee hadda laga heli karo Mac App Store